sharciyada iyo xeerarka Animal xayawaanka | USAHello | USAHello
sharciyada iyo xeerarka Animal xayawaanka
Americans ku qaataan lacag aad u badan si loo ilaaliyo cidlada xoolaha iyo in la dhiso xadiiqooyinka. beeraha iyo ranches ay kor u xayawaanka in ay soo saaraan cunto. Oo qaar badan oo Maraykanka ka fekeraan xayawaannada ay, sida caadiga ah bisadaha iyo eyda, oo qayb ka ah qoysaskooda. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira qaar ka mid ah xeerarka xoolaha iyo xayawaanka aad u baahan tahay in la raaco si looga fogaado in ganaax ama is xayawaanka aad idinka qaaday.
Sawirka Matt Stenovec
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah xeerarka in ay raacaan xoolo iyo xayawaanka ee USA.
Butros ku taliyaa in guryaha
maamulayaasha guri badan ama mulkiilayaasha hana u oggolaan in xayawaanka. Haddii ay sameeyaan, waxaa laga yaabaa in ay leeyihiin sharciyo xayawaanka gaar ah waa in aad raacdo ama ay ka qaadaan doonaa deposit badan oo ammaanka ama kirada dheeraad ah si niyad xayawaanka on hantidooda. Ka hor inta helitaanka xayawaanka ka mid ah nooc kasta oo, hubi mulkiilahaagu. Qaar ka mid ah u ogolaan doonaa bisad, laakiin ma eey, Qaar kale u oggolaan doona eeyaha yar. Qaar ka mid ah u ogolaan doonaa shimbir qafis, SOS a, taangiga ka mid ah kalluunka dahab ah, beer qudhaanjada, ama xataa mas cawska ah, laakiin ma eey ama bisad. xayawaanka sun ah ama cadaw ah nooc kasta oo aan ahayn mid la aqbali karo. Jabinta xeerarka mulkiile ee lagu hayo xayawaanka tirtiri kartaa heshiis oo keeni karta in khasaaraha ka mid ah gurigaaga.
Haddii aad ku raaxaysato shirkadda xoolaha, laakiin ma waxaa loo ogol yahay in ay iyaga ku hay gurigaaga, fiirsan tabarucidda hoy xayawaan ama bilaabista ganacsi yar sida xayawaan Wadaha, Tababaraha ama groomer.
taranta xoolaha la xadiday ee degaanada badan, sidaas darteed hubi in aad dawladda hoose ka hor ogolaanshaha aad eey ama bisad leedahay dhallaanka; iibinta xayawaanka ayaa sidoo kale nidaaminaya meelaha qaarkood. Waxaa jira badan oo ku saabsan dukaamada xayawaanka, hoyga iyo meelaha quduuska ah ee hoos ku.
therapy, adeeg iyo caawimaad xoolaha
Dadka qaarkood ee USA waxay leeyihiin xoolaha in ay caawiyaan, lugu daro:
hanuuniyo eeyaha iyo fardo ku Indho Beeleen oo Dhago
“heegan” eeyaha loogu talagalay dadka qaba cudurka macaanka qalal iyo
caawiyeyaasha daanyeer daryeelka shakhsi ahaaneed ee dadka naafada ah
xayawaanka raaxada sida bakaylaha, shimbiraha, bisadaha, iyo eeyaha si loola dagaallamo walwalka
ilaalinta ama watch eeyaha (iyo xataa doofaarro) si ay u ilaaliyaan khataraha kale
Ha la yaabin si ay u arkaan eeyaha in isbitaalada, dhakhaatiirta’ xafiisyada, guryaha waayeelka, suuqyada, garoomada diyaaradaha iyo firdows. Inta badan waa kuwo dabacsan, laakiin marnaba salaaxid eey oo aan marka hore ogolaansho ka hesho Handler ah.
Haddii dhakhtar ayaa kuu qoray daaweynta ama kaalmada xayawaanka ah, oo aad loo tababaray daryeelka xayawaanka in, mulkiilaha sida caadiga ah waxa uu leeyahay si ay u aqbalaan. Laakiin waa in aad haysato waraaqaha rasmiga ah ee caddaynaya xayawaanku yahay aqoon iyo loo baahan yahay in lagugu badbaadiyo, oo waa in ay marnaba noqon khatar ku tahay qof kasta oo kale.
Police iyo shaqaalaha badbaadinta inta badan isticmaalaan eeyaha iyo fardo si aad u hesho dadka lumay ama in la xakameeyo xaalado khatar ah. Marka aad aragto qof eey ama faras shaqeeya, waxaa fiican inaad addeecdaan wixii amarro iyo ma kala go'do ama aad u hesho oo jidka.
Licensing iyo xeerarka kale ee xayawaanka
bulshada badankoodu waxay leeyihiin xeerar xayawaanka in aad u baahan tahay in ay xoolo caafimaad qaba. Waxay ku warsan in xayawaanka Saaxiibkiis sida eyda iyo bisadaha la tallaali waayo raabiyada iyo shati, si ay u la fuulaan kartaa cudur-free oo ku soo laabtay haddii lagu helo orodka dabacsan. Magaalooyinka qaar waxay u baahan yihiin xayawaanka in la dhufaantid, ama “go'an,” sidaas darteed ma waxay soo saari kartaa. ganaax Large lagu soo oogi karo iyo xayawaanka aad laga qaadi haddii shuruudahan aan la buuxin.
Sharciga wuxuu leeyahay xayawaanka waa kulaylka ka leeyihiin hoyga, qabow, roobka iyo barafka. Ka hubi waaxda booliska ama xafiiska gacanta xoolaha wixii faahfaahin ah. Haddii aad isku aragto xayawaankaaga waa la la'yahay, hubi xaafadda, wac booliiska ama gacanta xoolaha, oo ilaa ogeysiisyada, iyo monitor “xayawaanka helay” websites.
Haddii aad xayawaanka la ururiyo by booliska, waxaad yeelan doontaa in la caddeeyo waxa idinkaa iska leh by saara diiwaangelinta iyo tallaalka shahaadooyinka, iyo waxaa laga yaabaa inaad bixiso ganaax badan, mararka qaarkood sida ugu badan ee $100, si ay dib ugu heli xayawaankaaga. Haddii aadan sheegan xayawaankaaga dhowr maalmood gudahood, xayawaanka la dilay waxaa laga yaabaa in (euthanized, “hoos u dhigay” ama “u seexan”).
Meelaha baadiyaha ah, shati xayawaanka waxaa laga yaabaa in aan loo baahan yahay, laakiin rabeysan oo dhan tirada iyo noocyada waa wali waa la tallaali, kormeerayo ama ku jira. Haddii xayawaan waxaa ka dhumaya xero ah oo sababa shil, Milkiilaha xoolaha ee lagu qaadi karaa bixinta oo dhan magdhow ah. Tani waa si gaar ah halis ah xoolo badan oo u ekaa fardo iyo lo'da, laakiin xayawaanka xitaa kuwa yaryar keeni kartaa darawallada in ay leexan oo shil. Haddii aad gaari waddo oo kala kulmaan neef xayawaan ah ee Jidka, sii toos ah wheel iyo hoos. Signal iyo guurto dhinaca wadada haddii aad ku dhuftey xayawaan. Faahfaahin dheeraad ah oo arrintan ku saabsan ee hoos ku, under “xoolaha Xoolaha iyo beeraha.”
Waxaa aad u fiican in lagu bixiyo neutering, talaal iyo Oggolaanshaha afka hore. kharashka kuwa caadi ahaan ay maamulaan oo ku saabsan $400, ku xiran tahay xajmiga iyo galmada ee xayawaanka. Intaas ka dib qiimaha quudinta iyo daryeelka xayawaanka celceliska ku saabsan yahay $600 sanadkiiba. Iibso agagaarka kharashka yar rugaha caafimaadka xoolaha iyo dhacdooyinka xilliyeed kor u korsato xoolaha qiime jaban.
maamuuska xayawaanka Good
Ma aha qof kasta jecel yahay xayawaanka ama ansixiyaan iyaga ka mid ah oo ku nool guryaha iyo fuushan baabuur. Dadka qaarkood waxay ka cabsadaan of ama xasaasiyad iyaga. Ha martida gurigaaga og tahay inaad qabtid xayawaanka oo weydii haddii ay wax dhibaato ah ka hor inta ay yimaadaan. Waa inaad edeb leedahay in ay ku riday xoolaha qol kale marka guests booqanaya, iyo haddii xayawaanka ku naceen shisheeyayaal, waxa uu ku laab talinayaa. Dad badan oo eeyaha ammaanka, sidaa darteed ma si kibir ah in ay soo booqdaan qof aan martiqaad. Haddii adiga ama qof kale uu qaniino by eey, aad u hesho daryeel caafimaad oo dhakhso iyo soo sheegtaa booliiska si ay u ilaaliyaan karo khatar ku tahay caafimaadka guud.
bulshada intooda badan waxay u baahan yihiin eyda iyo bisadaha labadaba la leashed ama joojiyey markii guriga ama dayrka ka baxsan si looga hortago in dhibtaada dadka kale oo ay u ilaalin gaar ah.
Butros Sharuucda dhaawacyo iyo xadgudub
Haddii xayawaanka ayaa waxaa haleelay gaari, xoolaha wareeriyay, ama qaniino qof halka ambaday u gaaraan, booliiska ayaa laga yaabaa in ay dilaan si loo ilaaliyo dadweynaha. Mararka qaarkood xayawaan ku dhaawacmay ayaa la hoos gelin haddii aanay jirin mid si loogu bixiyo daryeel caafimaad. laga yaabaa in lagugu soo dalaco wixii magdhow iyo kharashyada. xayawaanka A orday sidoo kale noqon kartaa dhibanaha of a xayawaanka ugaadha uubato yar ama kuwa kale, ama qaaday in qof marnaba sheegay in.
xayawaanka Companion waa in aan lagu xadgudbin, Haddii dhaawac ee USA, oo waa dambi aad u culus ku dhowaad meel kasta u leedahay neef xayawaan ah kudin. Sharci fiican raacay by milkiilayaasha badan xayawaanka ma aha in wax la xoolaha saaxiibka in aadan sameyn lahaa ilmo samayn. tixgelin kale waa in ay ogaadaan in haddii aad gaajaysan tahay, oomman, kulul ama qabow, xayawaanka saaxiibkaa malaha waa, aad, si aad wax kasta oo raaxo siiyaan naftaada waa in la kordhiyay in xayawaanka.
xoolaha Xoolaha iyo beeraha
xoolo badan oo kala duwan waa la kiciyey on beeraha iyo ranches ee USA, oo ay ku jiraan sac, fardo, idaha, riyaha, doofaarro, digaagga, bakaylaha, gorayada, llamas, qoraafiga, iyo Kalluunka iyo xayawaanka qolofleyda. xoolaha intooda badan waxaa lagu hayaa in ay soo saaraan cunto, laakiin qaar ka mid ah waxaa lagu hayaa waxbarashada ama raaxo. Qaar kale waxay ku nool yihiin goobo ama hoy meesha xayawaanka aan lagu dili karin oo cunay.
Maraykanka intooda badan waa cuna hilibka, laakiin ilaa 10% ee dadka ka mid ah waxay leeyihiin xoog leh diinta, sababaha deegaanka ama caafimaadka cunidda khudaarta kaliya. Dadka qaarkood waxay cuni doonaan kalluunka iyo digaaga, laakiin ma “cas” hilib (lo'da ama weylaha lo'da, hilibka doofaarka ka doofaarro, ama wan yar oo mutton ka idaha). Qaar ka mid ah magaalada deggan ee sii digaagga for ukunta, halkaas oo loo oggol yahay.
Sababo la xiriira doorashada ee hilibka ariga ka mid ah qaxooti badan, tiro ka mid ah beeraha ariga ayaa la aasaasay. Cunista hilibka faraska waxaa guud ahaan Wajiguu u dul ee USA, oo waa sharci darro in bulshada ugu cuni faras, eyga, cat, ama xayawaan kale oo guud ahaan ama dhaqan ahaan u dhawray sida xayawaanka ama saaxiibka. Xamaam ama dabagaalaha qabtay duurjoogta ah waxaa laga yaabaa in OK in la cuno, laakiin marnaba ma qaadi xoolaha sida ee park dadweynaha.
Meelaha baadiyaha ah, waad arki kartaa, ishkinkii lo'da ama idaha qabka waday waddooyinka by dadka lugaynaya iyo baabuurta, eeyaha ka shaqeeya dhinacyada ay. lo ', kuwaas oo sii xaq Jidka. Joogso oo sug dhaqatada si aad ugu ruxruxaa marayo, oo si tartiib ah sii wadi. Ha Honk aad geeska ama aad keeni kartaa isriixidda a. Haddii xayiran guuto, dariishadaha soo giringiriyey, hana noqon mid aad u la yaabay, haddii sheepdog a fuulaa badan gaariga si aad u samayn ay shaqo.
Beeralayda ayaa muddo dheer ku tiirsanaayeen bisadaha ka mid ah badar iyo abuur si ay u sii jiir. Masaska ayaa sidoo kale jecel yihiin in ay cunaan jiirka (in kastoo inta badan masaska hooyo ma aha jeclaan of bisadaha), sidaas cat beer iska haysan kartaa labada jiirarka iyo masaska. Waxaa ugu fiican si loo hubiyo in bisadaha xitaa beeraha (ama “Mouser” sida ay mararka qaarkood loo yaqaan) la tallaalo iyo dhufaantid.
Racing iyo dagaal
fardo iyo eeyaha Labadaba waxaa u orotameen Isboortiga, laakiin kaliya in a dalalka yar. Dad badan ayaa u malaynaysaa in taasu waa naxariisdarro xayawaanka iyo khatarta ah, waayo, dadka sharad jinsiyadaha ee, si ay sharcigeeda sameeya dawlada. Ma jirto meel dogfighting sharci, iyo ciqaab fal dambiyeed aad u daran ayaa jira kuwa qabsaday gelinaya xoolaha iyo dadka halista. Ciyey-dagaal waa sharci darro meel kasta Louisiana iyo New Mexico marka laga reebo, oo waxaa si weyn loo ma taageersana xitaa waxaa.
Labaatan dalalka leeyihiin sharciyo xayawaanka in la mamnuuco xayawaanka qalaad, sida xamaarato waaweyn, shabeelka iwm. In ka meelaha ay yihiin kuwo sharci ah, kuwan “exotics” waa in ay haystaan ​​ruqsadaha iyo shatiyada iyo in si taxadar leh kormeero si looga hortago in ay ka sii galay deegaanka dabiiciga ah ama abuurista dhibaatooyinka xoolaha ee hadda jira iyo milkiilayaasha ay. masaseed Burma, tusaale ahaan, keenay USA by ururiya oo la sii daayay ama baxsaday, ayaa la ogaaday inay cunaan xayawaanka xaafadda iyo duur-joogta degaanka.
Qaar ka mid ah dukaamada iibiyaan xayawaanka, inta badan eeyaha, bisadaha, jiirka yar yar iyo shimbiraha, laakiin sidoo kale waxa fashion ugu dambeeyey. xayawaanka cusub qaarkood waa la rijeynaya in xaaladaha aan naxariis lahayn si ay u qanciso jajuubi ugu dambeeyay abuuray by filim ama isbeddello kale. xayawaanka Dhanka kale waxaa lagu soo dejiyey in guryo la'aanta guryaha daryeelka. Haddii aad rabto in aad xayawaanka, ka fikir in uu hoy xoolaha ee degaankaaga socday halkii dukaanka xayawaanka.
Bandhigyada iyo bandhigyo
Dadka qaarkood ee USA, kuwaas oo run ahaantii ku faani bisadaha ay, eeyaha, shimbiraha qalaad, iyo fardo si joogto ah u kulmaan si ay u muujiyaan xoolahooda. Waxay leeyihiin ururada iyo majaladaha horumarinta hiwaayad. Ardayda waxaa si firfircoon uga qayb geli karaa oo muujinaya xayawaanka beeraha iyo xoolaha. Dad badan waxay jecel yihiin in ay muujiyaan talantigii ka mid ah eeyaha ugaarsiga iyo ido-dhaqashada ee ay tartamada oo loo yaqaan “tijaabooyin.” Haddii aad u tagto, daawado sida dadka kale u dhaqmi agagaarka xayawaanka, iyo aragto in milkiilayaasha ugu aadan rabin shisheeyayaal taabashada xoolahooda.